အဖြစ်တားမြစ်ဖြစ်မည်အကြောင်း၊အစဉ်အမြဲရှိပါတယ်ကြောင်းတစ်ခုခုဆိုးညစ်သောအမှုအရာပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်သင်အပေါ်နှင့်အမျိုးမျိုး၌သင်တို့ကိုအရူးနည်းလမ်းများ၊နှင့်အစဉ်အမြဲသင်ပြန်လာအတွက်ပို။ လျှင်သင်ရှိသည်အနည်းငယ်အရာ၊စိတ်ကူးစိတ်ကမ်း၊ရမ္မက်တဏှာ၊သို့မဟုတ်ရုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတကယ်မသိချင်သင်ျကား၊ငါတို့သည်သင်တို့အကောင်းဆုံးဂိမ်းစတိုးဆိုင်၌အသင်တို့အဘို့အ။ သူတို့ကျေနပ်အောင်လိမ့်မည်အားလုံးသင့်ရဲ့အလိုဆန္ဒနှင့်အမြဲအသစ်အကြောင်းအဘို့အဆင်သင့်သင်သည်အသီးအသီးနေ့တော့လာသောအခါသင်သည်နောက်ကျောနောက်တဖန်မကျော်နှင့်အပြီး၊သူတို့မသွားပါစေလိမ့်မယ်နှင့်သင်အမြဲရှိသည်အရာတစ်ခုခုသင်တွန်းအားပေးရန်အစွန်းကျော်။, သင်ျညမ်းဂိမ်းများရှိပါတယ်များ၏စုံလင်ခြင်းရောစပ်အွန်လိုင်းဂိမ်းကစားခြင်းအရကိုက်ညီသော naughtiest နှင့်အများဆုံးနှိုးဆှအမျိုးအစားအရွယ်ရောက်ဖျြောဖွရေးစက်မှုလုပ်ငန်း။ ဒါပေမယ့်စိတ်မပူပါနဲ့၊ကျနော်တို့စောင့်ရှောက်မည်သင်အကြိုက်ဆုံးအသွားအချိန်တစ်လျှို့ဝှက်ချက်၊ကျွန်တော်တို့ဂရုစိုက်ပေးနေပါသည်သင်သည်အဘယ်အရာကိုမျှပေမယ့်အကြွင်းမဲ့လက်ချအကောင်းဆုံးအသင်ျညမ်းဂိမ်းအပေါ်ဝဘ်နေ့၊နှင့်အတိအကျဘာကိုဖွင်သင်ျညမ်းဂိမ်းများပါဘူး။, ဒါဟာလုံးဝအဆင်ပြေဖို့ဝန်ခံရပေါ်လှည့်စောင့်ကြည့်အဆင့်ညီအစ်ကိုမင်းသူတို့၏ခြေလှမ်းအစ်မ၊မိခင်နှင့်အတူပျော်ရွှင်စရာများသူတို့ရဲ့အဆင့်အသား၊နှင့်ပင်မိသားစုကပဲအများကြီးပိုပြီးနီးကပ်ဆက်စပ်နှင့်တာဝန်များကိုပင်ပိုပြီးလိင်အလိုရှိသောအဘို့အသီးအသီးအခြားထက်သောသွားတော့ခက်နှင့်လုံးဝရိုင်းသော၊ရှာဖွေစူးစမ်းအသီးအသီး၏အခြားအလောင်းတွေနှင့်မေတ္တာတိုင်းစက္ကန့်။
အားလုံးသင့်ရဲ့ဖျော်ဖြေရေးအတွက်သေချာစေရန်သင်ခံစားရပျော်အပါးကဲ့သို့သင်တို့ရှေ့မှာဘယ်တော့မှအခါထွတ်ကိုဒီဂိမ်း။ အဖြစ်ကောင်းစွာသကဲ့သို့သင်တို့အဘို့အသင့်ရဲ့ထိန်းချုပ်ယူမှဂိမ်းအတွေ့အကြုံနှင့်အဘယျသို့သငျသညျခငျြ။ ဒါကြောင့်ထိန်းချုပ်ရေးယူ၊အခုပေါ်သင်ျညမ်းဂိမ်း! လူတိုင်းတွင်အယဉ်အတွက်၊နှင့်ဤသည်၏တစ်ခုဖြစ်သည်၊ကျွန်တော်တို့အားလုံးလေ့အရာမလုပ်သင့်ဘူးများနှင့်အမှုအရာကျနော်တို့မရနိုင်ဘူး။ သို့သော်၊သင်ျညမ်းဂိမ်းများသင်ပေးသည်အံ့သြဖွယ်သင်ျဂိမ်းများနှင့်ဤမျှလောက်ပိုအပေါ်တစ်ဦးကိုအသုံးပြုရန်လွယ်ကူသောပလက်ဖောင်းကအမျိုးအစားစင်ကြယ်သောတရား။ သင်ချစ်လိမ့်မည်ပြင်းထန်မှုနှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုအရာဆောင်ခဲ့ကြ။, သင်ထွတ်အောင်ကြိုးစားသင်မြင်သောအခါထိပ်အရည်အသွေးမြင့်မားသောချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်အမြင်များ။ အခါသင်ကြားပြင်းထန်သောညည်း၊grunts၊အသံအမည်သို့စိုဤရွေ့ကြောပန္လာေရတဲ့အတူးနှင့်ပြည့်စုံကဲ့သို့အခြားပလက်ဖောင်းကိုပေးနိုင်ပါသည်။ ဤသည်လုံခြုံသင့်ရဲ့အာကာသနှင့်အလိင်ကတိကျပြတ်ကြပြီအပေါင်းတို့အဘို့အမှုအရာသင်ျ။ နှုတ်ဆက်စကားဆိုဖို့အခြားဆိုက်များကင်းမဲ့ကြောင်းဤပြင်းထန်သောနှင့်နှိုးဆှ။ ဟုပြောဆိုနှုတ်ဆက်ပြီးမှပလက်ဖောင်းအဘယ်သူအားကစားပြိုင်ပွဲပမေဲ့၊သူတို့ကြားခံကို၊သူတို့အမှုန်ဝါးဝါးနှင့် pixilated၊ဒါကြောင့်အတုနဲ့အဖြစ်ဖန်တီးသို့မဟုတ်စိတ်ကူးယဉ်ဗားရှင်းများနှင့်အခန်းကဏ္ဍကစားဗားရှင်းနဲ့တူသင်ျညမ်းဂိမ်းများပါဘူး။, ဤအပလက်ဖောင်းအဖြစ်သို့သတ်မှတ်အရည်အသွေးမြင့်မားညမ်းဂိမ်းချစ်ကြောင်းဆောင်ခဲ့သင်အရာအားလုံးသင်ျမတူဘဲမည်သူမဆိုနှင့်အင်္ဂါအဘယ်သူမျှမကအခြားပင်နီးစပ်သူလာ။ အတိအကျအဘယ်ကြောင့်အပေါင်းတို့သည်မိမိတို့အဖွဲ့ဝင်များသည်မေတ္တာနှင့်အစဉ်အမြဲပိုပြီးပြန်လာမယ့်စောင့်ရှောက်ပျော်စရာနေ့တိုင်း။
မသာသင်ျညမ်းဂိမ်းများအသုံးပွုဖို့လွယ်ကူပါတယ်နှင့်ကမ်းလှမ်းအနေနဲ့အံ့သြဖွယ်အရည်အသွေးအကြောင်းသတိထား၊ဒါပေမယ့်ဂိမ်းပလက်ဖောင်းကအလွန်လွယ်ကူ။ ခံစားသင်ျညမ်းဂိမ်းများနှင့်အပေါငျးတို့သညျအဆောမိသားစုလျှို့ဝှက်ချက်များနှင့်သင်ျစိတ်ကူးယဉ်သူတို့ခွင့်ပြုအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့အသုံးပြုသူများမှအတွေ့အကြုံအပေါ်အခမဲ့အမျိုးမျိုးရှိသမျှတစ်ခုတည်းတဦးတည်း၏ထုတ်ကုန်။ အဘယျသို့အဘယ်သူမျှမနေပါစေသင်သည်ကိုယ်ပိုင်၊အဘယ်အရာကိုလည်ပတ်စနစ်သို့မဟုတ်ရာက္ဇာကိုသုံး၊သင်ကကစားနိုင်ပါတယ်၊ဒီဂိမ်းနှင့်အတူသမျှသောစကားတို့ကိုအဘယ်သူမျှမပြဿနာတွေ။ သင်အမည်ရရဘာမျှမဒါပေမယ့်အကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံအရလေ့လာစူးစမ်းဖို့အားလုံးကိုကဏ္ဍများ၏ဆောသင်ျညမ်းဂိမ်းများသင်အမြဲလိုချင်။, ဒါဟာမှာအားလုံးသင့်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုနှင့်သင့်ရဲ့လက်ချောင်းထိပ်မှာ၊အားကစားအချိန်မရွေးနှင့်ဘယ်နေရာမှာမဆိုသင်ချင်တယ်။ ပျော်စရာများနှင့်ပျော်မွေ့ဖွယ်လင်းနှင့်ကြွမှုရကနေအပူနှင့်မိုးသည်းထန်စွာမိသားစု orgies၏မိုဘိုင်းအပေါ်ဆဲလ်ဖုန်း။ ခံစားယုတ်ခြေလှမ်းသမီးဖြစ်ခြင်းနှင့်ပြစ်အတွက်အသုံးပြုအများဆုံးနှိုးဆှနည်းလမ်းတွေအားဖြင့်သူတို့ရဲ့အဆင့်အဘတို့အပေါ်သင်၏တက်ဘလက်။ ခံစားအမြင့်ဆုံး၊အများဆုံးဂုဏ်နှင့်လက်တွေ့ကျညည်း၊အရူးလုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်ဂရပ်ဖစ်၊အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်ပြင်းထန်သောသင်ျညမ်းအားဖြင့်ဒီဂိမ်းအပေါ်သို့မဟုတ်။, သင်ျညမ်းဂိမ်းဆောင်တတ်၏တစ်ဦးစုဆောင်းမှု၏အကောင်းဆုံးအသင်ျညမ်းဂိမ်းများဝဗ်မှ၊လူအပေါင်းတို့သည်တစ်နေရာတည်းတွင်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်သည့်အပေါင်းတို့သည်မိမိတို့အအသုံးပြုသူများကိုဘယ်တော့မှမနိုင်ရဖို့လုံလောက်တဲ့နှင့်အဘယ်ကြောင့်သူတို့ကအထိပ်တန်းအဆင့်သတ်မှတ်။ သူတို့ရဲ့အကြောင်းအရာသင်၏စိတ်ကိုမှုတ်တော်မူမည်နှင့်သူတို့ဤမျှလောက်များစွာသောဂိမ်းအကြောင်းဖက်သို့တိုင်းတစ်ခုတည်းဆော၏အရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြာလုပ်ငန်းကသင့်ကိုဘယ်တော့မှလိမ့်မည်လုပ်ဆောင် shuffling အားလုံးအများအပြားရွေးချယ်စရာသတ်မှတ်မီကသင်။ ဒါကြောင့်၊သင်သည်အဘယ်သို့အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေ? အားဖြင့်ရပ်တန့်ခြင်းနှင့်ပြောပြင်းထန်သောအပျော်အပါးထိုက်နှင့်သာသင်ျညမ်းဂိမ်းများသင်ပေးနိုင်ပါသည်။, ယူချင်တယ်ဆိုရင်သင်၏အတွေ့အကြုံပြီးသင်သည်သူတို့ပလက်ဖောင်းပေါ်လာမည့်အဆင့်အတွက်လုပ်ကြကကိုအသုံးပြုနေစဉ်သင်အကြိုက်ဆုံးကစားစရာသို့မဟုတ်သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်နှင့်အတူ။ သင်ဘယ်တော့မှလည်းအများကြီးရှိသည်ပျော်စရာ!
ကစားခုအချိန်မှာအခမဲ့! ချိတ်ဆက်နှင့်အတူအခြားအသုံးပြုသူများ၏အွန်လိုင်းပျော်စရာရှိသည်၊ဆွေးနွေးခြင်း၊အတိအကျဘာ၏အသီးအသီးသင်နှစ်သက်ကြောင်းအသင်ျညမ်းဂိမ်းသင်တို့အဘို့အရရှိနိုင်တဲ့နှင့်ကောင်းတစ်အချိန်ရှိသည်နှင့်အတူကစားအသီးအသီးအခြားနှင့်အချိန်အဖြစ်ခံစားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတင်းမာသင်၏နှစ်ခုအကြား။ သင်ကမွေ့လျော်ပါလိမ့်မယ်လိင်စွန့်စားမဆိုအခြားနှင့်မတူဘဲပေါ်ညာဘက်ကိုဒီမှာသင်ျညမ်း။ လျှင်သင်တည်းဖြစ်ကြ၏သောသူလူအတော်များများချစ်ဝဲအပွစျရှိသေးခါးသီးချိုမြိန်ခြင်းနှင့်နှိုးဆွလိန်၏သင်ျ။ ဖြစ်စေသင်ကပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကစားသို့မဟုတ်သာမန်၊ဒီပလက်ဖောင်းသင်တို့အဘို့အရာ။, ပုံပြင်များနှင့်စိတ်ကူးယဉ်ဤဂိမ်းသင်တို့အဘို့ပေးသွားမှာပါလိမ့်မည်တွန်းသင်အစွန်းကျော်၊ဒါကြောင့်ကစားအတူအခြားအသုံးပြုသူများ၏အွန်လိုင်းသို့မဟုတ်သင့်ပိုင်ဆိုင်သူတစ်ဦးမိတ်ဖက်အဘို့ဆင်းအချို့သောပျော်စရာလိုပဲ။။။။။ အဘယျသို့အဘယ်သူမျှမနေပါစေသင်ရွေးချယ်သေချာဒီဆိုက်၏စာရင်း။ အားဖြင့်ရပ်တန့်စစ်ဆေးသင်ျညမ်းဂိမ်းများထွက်သောသူအပေါင်းတို့သည်သူတို့ပူဇော်။ သူတို့လိမ့်မည်သင်သည်အထွတ်နောက်တဖန်မကျော်နှင့်အထက်ခက်ခဲသင်အစဉ်အမီ!